Halyeey Kooxda Chelsea ah oo codsaday inaan la iibin N’Golo Kanté – Gool FM
Halyeey Kooxda Chelsea ah oo codsaday inaan la iibin N’Golo Kanté
(London) 22 Luulyo 2020. N’Golo Kanté ayaa lala xiriirinayay inuu ku biirayo midkood kooxaha Inter Milan iyo Real Madrid suuqan xagaaga, kaddib markii uu xilli ciyaareedkan ku dhibtooday naadiga ka dhisan Galbeedka Magaalada London ee Blues.
Halyeeyga kooxda kubadda cagta Chelsea ee Dennis Wise ayaa ka codsaday maamulka Blues inaysan iibin xiddiga reer France ee N’Golo Kanté suuqan xagaaga.
Dennis Wise ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada “Express” ee dalka England wuxuu shaaca ka qaaday:
“Waxaan jeclaan lahaa inaan sheego in xiddiga ugu muhiimsan qadka dhexe ee garoonka hubaal inuu yahay N’Golo Kanté, kaddib waxaa imaanaya Mateo Kovačić, Ross Barkley, iyo Mason Mount”.
“Waxaan qabaa in afartaas ciyaaryahan ay qeyb ka noqon doonaan saddexda ka ciyaareysa qadka dhexe ee qorsho ciyaareedka 4-3-3 ah”.
“Qaab ciyaareedka Mason Mount aad ayuu u fiican yahay, halka Ross Barkley runtii ay soo martay heerar aad u wanaagsan, weyna adag tahay in la go’aamiyo saddexdan”.
“Midkood xaqiiqdii waa N’Golo Kanté, waxaan u maleynayaa inuu aad muhiim ugu yahay ka ciyaarista qadka dhexe, sidoo kale waxaa jira Ruben Loftus-Cheek iyo da’ayarka Billy Gilmour, marka waa ciyaartoy fiican”.